China Vibration motera fanamboarana sy orinasa | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny andiana poloka eccentric azo ovaina dia apetraka amin'ny tendrony roa amin'ny vatan'ny rotor, ary ny hery mampientanentana dia azo amin'ny alàlan'ny fampiasana ny hery centrifugal vokarin'ny fihodinan'ny haingam-pandeha sy ny sakana eccentric. Ny halehiben'ny fihodinan'ny motera dia mihetsika lehibe, ary ny feon'ny mekanika dia azo ahena raha tsy mifanaraka tsara ny hery mampientanentana sy ny heriny. Misy karazany enina ny motera hovitrovitra, toy ny maody fanombohana sy fihazakazahana, hafainganam-pandeha sns.
Ny motera hovitrovitra dia loharano mampientam-po izay mampifangaro loharanom-pahefana amin'ny loharano mihozongozona. Ny andiana poloka eccentric azo ovaina dia apetraka amin'ny tendrony roa amin'ny vatan'ny rotor, ary ny hery mampientanentana dia azo amin'ny alàlan'ny hery centrifugal vokarin'ny fihodinan'ny haingam-pandeha sy ny sakana eccentric. Ny motera mihetsiketsika dia manana tombony amin'ny fampiasana betsaka ny hery manentana, ny fanjifana angovo ambany, ny tabataba ambany ary ny androm-piainana maharitra. Ny hery mampihetsi-po an'ny motera hovitrovitra dia azo ahitsy tsikelikely ary mora ampiasaina. Ny motera mihetsiketsika an'ny xjd, jzo, YZU, VB, XVM, yzo, YZS, YZD, TZD, tzdc ary karazana motera hafainganam-pandeha dia motera hovitrovitra iraisan'ny rehetra. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny milina hovitrovitra amin'ny ankapobeny, toy ny: crusher hovitrovitra, masinina fanamafisam-peo, hovitrovitra, hovitrovitra, hovitrovitra, hovitrovitra, hovitrovitra, hovitrovitra, famotoana hovitrovitra, fanaparitahana fitaovana enti-manakana ny silo, sns. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fananganana angovo herinaratra, famokarana angovo hafanana, fananganana, akora fananganana, indostrian'ny simika, fitrandrahana, arintany, metallurgy, indostria maivana ary sehatra indostrialy hafa.
1. Raha mifanandrify tsara ny hery mampientam-po sy ny herinaratra, lehibe ny hery hovitrovitra, maivana ny lanjan'ny vatana, kely ny feony ary ambany ny tabataba mekanika.
2. Satria ny motera mihetsiketsika dia vibration fanoherana mahery vaika fa tsy resonance, manana amplitude marin-toerana izy io.
3. Ny habetsaky ny habetsaky ny hovitrovitra dia lehibe. Raikitra ny refin'ny fivezivezena ao amin'ny excite vibration electromagnetic, izay mazàna mitovy amin'ny taham-pahefana famatsiana herinaratra, raha ny ozatra aotomotan'ny motera hozatra kosa dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny hafainganam-pandeha, ary ny hafanana mihoampampana ary ny amplitude dia mety voafantina arakaraka arakaraka ny lalana samihafa.
4. Noho ny fiovaovan'ny famatsiana herinaratra dia hanova ny hery mampientanentana be loatra ny fientanentanana elektromagnetika noho ny fiovan'ny herinaratra, fa io fanovana io dia tena kely dia kely amin'ny motera mihetsika.
5. Ny fitambaran'ny milina marobe dia afaka mahatsapa ny fampifanarahana ny tena sy ny fepetra takiana amin'ny dingana samihafa.
6. ny fitarihan'ny hery mampientam-po dia azo ovaina arakaraka ny fomba fametrahana ny motera hovitrovitra.
7. ny hery mampientam-po sy ny amplitude dia azo ahitsy tsy miandalana afa-tsy amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny zoro sakana eccentric ihany.
8. Tsotra ny fikolokoloana. Satria ny lohataona dia tsy ampiasaina toy ny karazana electromagnetic, ny asa fikojakojana toy ny fanitsiana ny fahazoana mizana sy ny fanitsiana lanja dia azo sorohina, ary ny fiterahana dia mila fikojakojana tsy tapaka.
Previous: Takelaka sivana
Feeder hovitrovitra Motor
Tzd Vibration Motor
Motor mandeha hovitrovitra
Mpanamboatra motera mihetsiketsika
Vidin'ny motera hovitrovitra
Zdj Vibration Motor